Nyaniseka KuBukumkani BukaThixo Ngokungathathi Cala Kwimilo Yehlabathi
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI Cakchiquel (Western) ISepedi ISpanish Isi-Iban Isi-Itali IsiBhulu IsiCambodia IsiChol IsiDangme IsiEwe IsiFrentshi IsiGa IsiGarifuna IsiGreenland IsiHmong (White) IsiKaren (SaseS'gaw) IsiKikongo IsiKiluba IsiKimbundu IsiKisonge IsiKwangali IsiKwanyama IsiLaotia IsiLingala IsiMaltese IsiMam IsiMazatec (sesiHuautla) IsiMixe IsiMyanmar IsiNahuatl (saseCentral) IsiNahuatl (saseHuasteca) IsiNahuatl (saseNorthern Puebla) IsiNdebele IsiNdonga IsiNgabere IsiNgesi IsiNzema IsiOtetela IsiPhuthukezi IsiQuechua (saseAncash) IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseCuzco) IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili (saseCongo) IsiSwati IsiTahiti IsiTlapanec IsiTojolabal IsiTotonac IsiTsonga IsiTswana IsiTwi IsiUmbundu IsiVenda IsiWayuunaiki IsiXhosa IsiZulu
“Abayonxalenye yehlabathi.”—Yohane 17:16.
IINGOMA: 63, 129
Kwakutheni ukuze uYesu angabi nohlanga alujonga njengolongamileyo?
Ekubeni kungekho rhulumente womhlaba simxhasayo, sixhasa bani yaye ngoba?
Ungazifundisa njani ukunyaniseka kuYehova nakuBukumkani bakhe?
1, 2. (a) Ukunyaniseka kuYehova kunxibelelene njani nokungathathi cala kwimilo yeli hlabathi? (Jonga umfanekiso osekuqaleni.) (b) Bathanda ntoni abantu abaninzi namhlanje, ibe oko kubangele ntoni?
ABAKHONZI bakaYehova abathathi cala kwimilo eyahlukanisa abantu njengobuzwe, ubuhlanga okanye izithethe. Ngoba? Kaloku siyamthanda uYehova, sinyanisekile kuye yaye siyamthobela. (1 Yohane 5:3) Nokuba sihlala phi okanye sisuka phi, siphila ngemilinganiselo kaThixo. Ayikho into ebaluleke ngaphezu kokunyaniseka kuYehova nakuBukumkani bakhe. (Mateyu 6:33) Yiloo nto sinokuthi ‘asiyonxalenye yehlabathi.’—Funda uYohane 17:11, 15, 16; Isaya 2:4.
2 Abantu abaninzi namhlanje bawathanda gqitha amazwe, uhlanga, izithethe zabo okanye amaqela emidlalo. Okubuhlungu kukuba, oku kuye kwabangela ukhuphiswano, ukuthiyana yaye ngamanye amaxesha nokubulalana. Nangona singayingeni le milo, inokuchaphazela iintsapho zethu okanye nathi siphatheke kakubi. Kungalula ukuthath’ icala xa oorhulumente besenza izigqibo ezisidlel’ indlala, kuba uThixo usidale sakwazi ukubona xa kusonakala. (Genesis 1:27; Duteronomi 32:4) Uye uvakalelwe njani xa kusenzeka izinto ezinjalo? Ngaba uye ukwazi ukuhlala ungathathi cala?
AmaKristu okwenyaniso awacingi ukuba kukho inxalenye yehlabathi likaSathana ebhetele kunenye
3, 4. (a) Kutheni singathathi cala kwimilo yehlabathi? (b) Siza kuthetha ngantoni kweli nqaku?
3 Abantu abaninzi bayayingena le milo kuba oorhulumente babafundisa ukuba ummi welizwe ufanele enjenjalo kakade. Kodwa thina silandela uYesu. Ngoko asingeni kwezopolitiko yaye asiyi emfazweni. (Mateyu 26:52) AmaKristu okwenyaniso awacingi ukuba kukho inxalenye yehlabathi likaSathana ebhetele kunenye. (2 Korinte 2:11) Asifuni kwanto esidibanisa nemilo yeli hlabathi.—Funda uYohane 15:18, 19.
4 Kuba singafezekanga, abanye kuthi basenokuba basabajongela phantsi abantu abahlukileyo kubo. (Yeremiya 17:9; Efese 4:22-24) Kweli nqaku, siza kufunda ngemigaqo eza kusinceda silwe size soyise ezo mvakalelo zahlukanisa abantu. Siza kuthetha nangendlela esinokunyaniseka ngayo kuBukumkani ngokuzifundisa ukucinga njengoYehova noYesu.
ISIZATHU SOKUBA SINGAXHASI KWANTO EKWELI HLABATHI
5, 6. Xa uYesu wayelapha emhlabeni, wayebajonga njani abantu yaye ngoba?
5 Xa ukufumanisa kunzima ukungathathi cala, zibuze, ‘UYesu ebeza kuthini kule meko?’ Xa uYesu wayelapha emhlabeni, kwakukho imilo nokungavisisani phakathi kwamaYuda, amaGalili namaSamariya. Khawucinge ngale mizekelo. AmaYuda ayengathethisani namaSamariya. (Yohane 4:9) AbaFarisi nabaSadusi babengavisisani ngezinto ezininzi. (IZenzo 23:6-9) AmaYuda awayefunde uMthetho ayezicingela ukuba abhetele kunamanye amaYuda. (Yohane 7:49) Ibe amaninzi ayebathiyile abaqokeleli berhafu namaRoma. (Mateyu 9:11) Kodwa uYesu akazange ayingene loo milo. Nangona wayesoloko ethethelela uYehova, esazi nokuba uSirayeli luhlanga lukaThixo olukhethekileyo, akazange afundise abafundi bakhe ukuba babhetele kunabanye abantu. (Yohane 4:22) Kunoko, wabafundisa ukuba bathande wonk’ umntu.—Luka 10:27.
UYehova noYesu abayicingi into yokuba kukho uhlanga okanye ulwimi olubhetele kunolunye
6 Kwakutheni ukuze uYesu angabi nabantu bathile abajonga njengabongamileyo? Kungenxa yendlela yena noYise ababajonga ngayo abantu. UYehova wadala abantu ukuba bazalise umhlaba ngeentlanga ezahlukahlukeneyo. (Genesis 1:27, 28) Ngoko uYehova noYesu abayicingi into yokuba kukho uhlanga okanye ulwimi olubhetele kunolunye. (IZenzo 10:34, 35; ISityhilelo 7:9, 13, 14) Nathi kufuneka sixelise umzekelo wabo ogqibeleleyo.—Mateyu 5:43-48.
7, 8. (a) Sikhetha icala likabani, yaye ngoba? (b) Simele sikhumbule ntoni ngesisombululo seengxaki zabantu?
7 Kutheni singabaxhasi oorhulumente okanye abalawuli babantu? Kungenxa yokuba sikhetha icala likaYehova. Nguye uMlawuli wethu. E-Eden, uSathana wathi uYehova akakwazi ukulawula abantu. Wayefuna abantu bakholelwe ukuba indlela yakhe yokwenza izinto ibhetele kunekaThixo. UYehova uyasiyeka sizikhethele icala. Kuthekani ngawe? Ngaba umthobela uYehova kuba ukholelwa ukuba indlela yakhe yokwenza izinto ibhetele kuneyakho? Ngaba uqinisekile ukuba buBukumkani bakhe kuphela obunokulungisa iingxaki esinazo? Okanye ucinga ukuba abantu bangazilawula kakuhle ngaphandle kukaThixo?—Genesis 3:4, 5.
8 Ngokomzekelo, ukuba ubuzwa ngumntu ukuba ucinga ntoni ngeqela elithile lezopolitiko okanye lamalungelo entlalo, ungamphendula uthini? Amanye ala maqela kusenokwenzeka ukuba anyanisekile yaye azimisele ngokwenene ukunceda abantu. Kodwa thina siyazi ukuba buBukumkani bukaYehova kuphela obunokulungisa iingxaki zabantu buze bushenxise nokungekho sikweni. Sithobela nokhokelo lukaYehova ebandleni, akukho mntu wenz’ unothanda. Yiloo nto kukho umanyano ebandleni.
9. Yiyiphi ingxaki awayenayo amaKristu enkulungwane yokuqala, yaye kwakufuneka enze ntoni?
9 Ngenkulungwane yokuqala, amaKristu aseKorinte ayexambulisana esithi: “‘Mna ndingokaPawulos,’ ‘Kodwa mna ndingoka-Apolo,’ ‘Kodwa mna ndingokaKefas,’ ‘Kodwa mna ndingokaKristu.’” UPawulos wothuka akuva le nto. Yayiyingxaki enkulu le, kuba uxolo lwebandla lwalusengozini. Ngoko wawabuza esithi: ‘UKristu wahlulelene na?’ UPawulos wathi kuwo: “Ndiyanibongoza, bazalwana, ngegama leNkosi yethu uYesu Kristu ukuba nonke nithethe ngokuvumelanayo, nokuba kungabikho kwahlukana phakathi kwenu, kodwa nimanyane engqondweni enye nasengcamangweni enye.” Nanamhlanje kusenjalo. Akufanele kubekho yantlukwano ebandleni.—1 Korinte 1:10-13; funda amaRoma 16:17, 18.
10. UPawulos wawakhumbuza ntoni amaKristu, yaye sifunda ntoni koku?
10 UPawulos wakhumbuza amaKristu athanjisiweyo ukuba angabemi basezulwini nokuba awamele azixakekise ‘ngezinto zasemhlabeni.’ (Filipi 3:17-20) * (Funda umbhalo osemazantsi.) Abathanjiswa ngoonozakuzaku abamela uThixo noKristu. Xa unozakuzaku ekwelinye ilizwe, akazingeni iingxaki nezopolitiko zelo lizwe. Ngokufanayo, akufanelekanga ukuba umthanjiswa angene iingxaki neepolitiki zeli hlabathi. (2 Korinte 5:20) Abo banethemba lokuphila ngonaphakade apha emhlabeni abathathi cala kwimilo yeli hlabathi.
ZIFUNDISE UKUNYANISEKA KUBUKUMKANI BUKAYEHOVA
11, 12. (a) Yeyiphi indlela yokucinga esimele siyiphephe ukuba sifuna ukunyaniseka kuBukumkani bukaThixo? (b) Omnye udade wayevakalelwa njani, yaye yintoni eyamncedayo watshintsha?
11 Kwiindawo ezininzi, abantu baziva besondele kakhulu kubantu bemvelaphi, izithethe nolwimi lwabo. Badla ngokuzidla ngendawo abasuka kuyo. Kodwa masingavumeli le ndlela yokucinga isiphembelele. Kunoko, sifanele sitshintshe indlela esicinga ngayo size siqeqeshe izazela zethu ukuze sihlale singathathi cala nokuba sekutheni. Singayenza njani le nto?
12 Ngokomzekelo uMirjeta * (funda umbhalo osemazantsi) wazalwa kwilizwe elalifudula liyiYugoslavia. Apho akhulele khona, babethiyiwe abantu baseSerbia. Xa wafunda ngoYehova, waqonda ukuba uthanda bonke abantu, yaye uSathana ufuna bacaphukelane. Ngoko wazama kakhulu ukutshintsha indlela awayevakalelwa ngayo. Kodwa xa kwabakho imfazwe yeentlanga kwindawo awayehlala kuyo, uMirjeta waqala apho wayeyeke khona ukubathiya abantu baseSerbia. Wayengafuni nokushumayela kubo. Wayesazi ukuba oku akufanelekanga, ngoko wacela uYehova amncede atshintshe indlela awayevakalelwa ngayo. Wamcela nokuba amncede abe nguvulindlela. UMirjeta uthi: “Ukuxakeka entsimini kundincede ngeyona ndlela. Xa ndisentsimini ndiye ndizame ukuxelisa uthando lukaYehova yaye ndiye ndabona ukuba ndiya ndithamba.”
13. (a) Kwenzeka ntoni kuZoila, yaye wasabela njani? (b) Singafunda ntoni kule nto yehlela uZoila?
13 UZoila ngudade waseMexico owafudukela eYurophu. Kwibandla awayekulo, kwakukho abazalwana noodade abasuka kwezinye iindawo zoMbindi Merika. UZoila uthi abanye ebandleni babedla ngokuhlekisa ngelizwe lakhe, izithethe nomculo walo. Kwamcaphukisa oku, ngoko wathandaza kuYehova ukuba amncede angakhutyekiswa yile nto. Wawuza kuthini wena? Abanye babazalwana noodade basacaphuka gqitha xa kuhlekiswa ngamazwe abo. Ngoko masingaze sithethe okanye senze izinto ezinokwenza uhlanga oluthile lubonakale lubhetele kunolunye. Asifuni kucalula mntu ebandleni okanye naphi na.—Roma 14:19; 2 Korinte 6:3.
Cela uYehova akuncede ubajonge abantu ngendlela abajonga ngayo
14. Yintoni enokukunceda ubajonge abantu ngendlela uYehova abajonga ngayo?
14 Sonke siyazi ukuba abakhonzi bakaYehova bamanyene, ngoko masingaze sicinge ukuba kukho indawo okanye ilizwe elibhetele kwelinye. Kodwa intsapho yakho nabantu okhule nabo, basenokuba bakuphembelele ukuba uzingce ngendawo owazalelwa kuyo. Ngoko ke, mhlawumbi ukhe ubacalule abantu bezinye iintlanga, iimvelaphi, ulwimi okanye ibala. Yintoni enokukunceda utshintshe? Cinga ngendlela uYehova abajonga ngayo abantu abazidla ngamazwe abo okanye abacinga ukuba babhetele kunabanye. Phanda ngakumbi ngalo mbandela kunqulo lwentsapho okanye kufundo lwakho. Emva koko, cela uYehova akuncede ubajonge abantu ngendlela abajonga ngayo.—Funda amaRoma 12:2.
Ukuze sinyaniseke kuYehova, simele simthobele nokuba abantu bangasenza ntoni (Jonga isiqendu 15, 16)
15, 16. (a) Abanye bangasiphatha njani kuba sahlukile? (b) Abazali bangabanceda njani abantwana babo ukuze bahlale benyanisekile kuYehova?
15 Sifuna ukumkhonza uYehova sinesazela esihle, ngoko loo nto ingenza sahluke kakhulu kubantu esiphangela nabo, esifunda nabo, abamelwane okanye izalamane. (1 Petros 2:19) UYesu wasilumkisa ukuba siya kude sithiywe ngabantu kuba sahlukile. Khumbula ukuba uninzi lwabantu abasichasayo alwazi nto ngoBukumkani bukaThixo. Ngoko aluqondi ukuba kutheni kubaluleke kangaka ukuba sinyaniseke kuBukumkani kunoorhulumente babantu.
16 Ukuze sinyaniseke kuYehova, simele simthobele nokuba abantu bathini kuthi okanye basenza ntoni. (Daniyeli 3:16-18) Abantwana basenokukufumanisa kunzima ukwahluka kwabanye. Bazali, ncedani abantwana benu babe nesibindi esikolweni. Basenokoyika ukungakhahleli iflegi okanye ukungayenzi imibhiyozo yobuzwe. Kunqulo lwentsapho, ninokufunda ngendlela uYehova azijonga ngayo ezi zinto. Bafundiseni ukuba bakwazi ukuzichaza iinkolelo zabo ngentlonelo. (Roma 1:16) Ukuba kuyimfuneko, thetha nootitshala babantwana bakho ubacacisele ngeenkolelo zethu.
YINANDIPHE YONKE INDALO KAYEHOVA
17. Yiyiphi indlela yokucinga esimele siyiphephe, yaye ngoba?
17 Sidla ngokukunandipha ukutya, ubuhle, ulwimi nezithethe zendawo esikhulele kuyo. Kodwa ngaba sivakalelwa kukuba oko sikuthandayo kusoloko kubhetele kunoko kuthandwa ngabanye? UYehova ufuna sinandiphe izinto ezahlukahlukeneyo azidalileyo. (INdumiso 104:24; ISityhilelo 4:11) Ngoko kutheni sicinga ukuba into ukuze ibe bhetele imele yenziwe ngendlela yethu?
UYehova unqwenela ukuba zonke iintlobo zabantu ziphile ngonaphakade
18. Kusinceda ngantoni ukujonga abantu ngendlela uYehova abajonga ngayo?
18 UYehova unqwenela ukuba zonke iintlobo zabantu zifunde ngaye, zimnqule yaye ziphile ngonaphakade. (Yohane 3:16; 1 Timoti 2:3, 4) Ngoko xa abazalwana bethu benamacebiso ahlukileyo kwawethu, sikulungele ukuwaphulaphula, ukuba nje amkelekile kuYehova. Ukuba siyakwenza oko, ubomi bethu buba mnandi yaye sihlala ngomanyano nabazalwana bethu. Njengokuba sele sitshilo, ekubeni sinyanisekile kuYehova nakuBukumkani bakhe, asithathi cala kwimilo yehlabathi. Silithiyile ikratshi nokhuphiswano lwehlabathi likaSathana. Simbulela ngokwenene uYehova ngokusifundisa ukuthanda uxolo nokuthobela! Sivakalelwa njengomdumisi owathi: “Khangela! Hayi indlela ekulunge nekuthandeka ngayo ukuba abazalwana bahlale ndawonye ngomanyano!”—INdumiso 133:1.
^ isiqe. 10 Abanye kwibandla laseFilipi mhlawumbi babengabemi baseRoma ngokusemthethweni, yaye ngenxa yeso sizathu babenamalungelo angakumbi kunabazalwana babo ababengengabo.
^ isiqe. 12 Amanye amagama atshintshiwe.
Asithathi cala xa singayingeni imilo neembambano ezikhoyo ehlabathini kuba sesikwicala likaYehova. Sinyanisekile kuBukumkani bakhe, ngoko akukho lizwe, sithethe, lulwimi okanye bala esilijonga njengelibhetele kunelinye